Bal ii sheeg aabbahay, sidey Afrika u ahayd gumeystihii ka hor - Afrikhepri Fondation
Khamiis, Sebtember 24, 2020
Bal ii sheeg aabbo, sidee Afrika u ahayd gumeysiga kahor
min aqri 7 min
Bal ii sheeg aabbe, sidee buu Afrika u ahaa ka hor doorasho
Luu maadooyinka ka baahiyo filimaan ama filim af-galbeedka ah wuxuu ku xaddidan yahay gaadhista farsamo ahaan, muuqaalka aasaaska hore gumeysi Afrika, oo ay ku dhex noolaayeen bulshooyinka caadooyinka xun-xun. Mid ka mid ah waxa laga yaabaa in laga fikiray, laga yaabee, in gebogebada gumeysigu uu shaki ku abuuri lahaa dhacdooyin gaar ah oo ku saabsan taariikhda Afrika. Dhab ahaantii, maahan sidaas darteed colonialism waxay siisay habka loo yaqaan 'neocolonialism' (walaasheed mataanaha ah), baahida loo qabo caddaynta galbeedka, weli way isku mid tahay. Sidaa darteed, waxay nagu khasbaysaa in ay ogaadaan saamaynta taban ee sawiradaan ku inaannu ah jiilka ka yar Midowga Afrika iyo gaar ahaan si ay u oggolaadaan in ay waraaqo badan oo ujeedada si ay u madax banaan ka dhigi kartaa in ay opinion.
Waxaan hadda haynaa markhaatiyaal badan oo ka socda sahamiyayaal shisheeye ah kuwaas oo noo ogolaanaya inaan helno fikrad ah habdhaqanka dharka ee bulshooyinka Afrikaanka ka hor. Tayada dharka dharka ee heerarka dhaqameedka, waxaan markaa ka dib u mahadcelin karnaa si qoto dheer, gobolka jaaliyadaha Afrikaanka ah. Aan la bilowno cilmi-baarista Jarmalka Leo Frobenius (1873-1938). Waxay qaadatay ku dhawaad ​​daraasad daraasad oo ku taala Black Africa inta u dhaxaysa 1904 iyo 1935. Sidaa daraadeed waa markhaati furan oo naga tagay sharaxaad qaali ah oo ku saabsan caadooyinka dharka dad badan oo Afrikaan ah. Tusaale ahaan, wuxuu u sheegaa sidan :
"In 1906 marka aan soo galay dalka reer Kassai Sankuru, aan weli laga helay tuulooyinka kuwaas oo wadooyinka ugu muhiimsan ayaa damacsan dhinac kasta, waayo, miles, afar saf oo geedo timireed, iyo kuwaas oo sanduuqyada, mid kasta ku qurxinay charmingly ahaayeen sida shuqullo badan oo ka mid ah tahay. Ma jiro nin hubaysan oo qaali ah oo bir ah ama naxaas ah, iyada oo xuubka indhaha iyo jilbaha lagu daboolay maqaarka masaska. Meel kasta oo dhudhun ah iyo dhar bir ah. Koob kasta oo kasta, tuubbo kasta, weel kasta wuxuu ahaa sheyga farshaxanka (...) Miyuu ka duwan yahay Sudan weyn? No (...) Ururka gaarka ah ee dalalka reer Sudan jirey muddo dheer ka hor Islam, fanka ka muuqataa dhaqanka oo ka mid ah beeraha iyo edebtooda ... si ganacsade iyo nidaamyada shirkadaha Negro Afrika jira kumanaan ka weyn sano ee Europe (...) Waa xaqiiqo ah in sahaminta Afrika ee Equatoriala ay kaliya la kulantay ilbaxnimada qadiimiga ah.
Markhaati kale oo ka socda safarka xayawaanka ee Ca da Mosto oo ku saabsan Gambia, oo laga sameeyay qarnigii XIXaad, weli wuxuu inoo sheegayaa xaalada bulshooyinka qadarin la'aanta ah :
"Dadka (...) waxaannu sembloyent ... aad u madow, oo dhan dhar chemisolles suuf cad (...) dhowr madow (...) waa transportoyent in caravels our, qaar ka mid ah si ay u veoyr wax cusub, dadka kale in ay naga iibin siddo oo dahab ah iyo qaar ka mid ah hawlaha yar yar oo ay u isticmaalaan sida chemisolles, oo shabagyadoodii, maro suuf, difaan moodada, caddaan, kuwa kale qaxay halkaas oo doog ah caddaan iyo buluug, iyo kuwa kale ee cad casaan iyo buluug, iyo sidoo kale sameeyey . " Dapper, caan Dutch ah tilmaanta bulshooyinka Afrika uu, weli shaaca ka qaaday warbixin cusub oo muhiim ah oo ku saabsan caadooyinka dharka oo ka mid ah dadka deggan oo ka mid ah kooxda Fluminense bisha of Monomotapa iyo Guinea  ah"Aborea, meel u dhow Volta, dhammaan raggii reer Negroes waxay xiraan dharka suufka ah ... haweenkuna waxay xirtaan dhar la mid ah sida ragga (...)
Monomotapa, boqorradu ma beddelaan qaabkooda, waxay ku xiran yihiin dhar khardal ah oo dalka ku yaal; intay qaadi garab sickle rakibay-maroodi ah (...) Dadkii badnaana ku labisan shiraac suuf iyo weyn, daabac dahab Indian (...) Shacabka boqortooyada sarrifka Guinea ay farshaxankiisa ku samee (oo leh suufkooda) (...)
The Negroes of Wanqui leeyihiin dahab ah iyo dhar ogaado sida xoog leh soo jiidasho leh oo ay ku ganacsan la qarnigii Acanistes ".Ugu 16ème, Socotada caanka Arab Leo Africanus, oo magaciisa dhabta ah run ahaantii waa Hassan bin Mohamed al Wazzan EZ Zayatte, waxaan soo jiideen sharaxaad kooban oo ka mid ah dadka Dongola:
"Dadka degani waa kuwa hodan ah oo la mid ah waayo waxay ka ganacsadaan dhar, hub iyo qalab kale oo Masar ah. " Si kastaba ha ahaatee, Sahra Carbeed oo ah Batuta oo booqday Suudaan 1352, ayaa naga tagay sheeko xiiso leh oo ku saabsan danaha dadyowga Afrikaanka qaarkood ee sayniska :
"Dadka Zahdaah waxay leeyihiin (...) badan oo qiiro u leh daraasadda sayniska." Wuxuu sii waday sheekadiisa isagoo sharaxaad ka bixinaya kulamada guud ee King Mandingo Soleiman Mança :
"Sultanka wuxuu inta badan ku dhex yaallaa alcove oo ku dhex maraya albaabka guriga. Dhowrka michoue, alcove waxay leedahay saddex daaqado alwaax ah oo ku daboolan weelasha iyo hoosta, saddex kale oo lagu dhejiyo taarbo dahab ah ama faaruq ah. Daaqadahaas waxaa lagu dhejiyaa daahyo la soo saaro inta lagu jiro maalmaha la fadhiisto si aan u ogaano in Sultant ay tahay inay halkaas joogaan.
Markii uu hoos fadhiya, waxaan dhex mari mesh ee suuqa a, xadhig silken kaas oo ku lifaaqan warshad Masri barbaro ku guntay oo sida ugu dhaqsaha badan dadka u arka waxa macno durbaanada iyo geesaheedaba ( ...) turjubaan Dougha taagan albaabka ku soo michouer ah, ku labisan dharka hodan zerdkana iyo dhar kale. Waxa uu xirtaa duub fringed, ekeeyey oo si aad horyalka Talyaaniga sida ay mode dalka; ayuu xirtaa ee kooxdiisa, galkeeda seef oo dahab ah; waayo, kabaha, kabaha, qof kale oo aan ahayn waxa uu leeyahay maalintaas mudnaan; ayuu xirtaa Spurs oo qabta in gacmaha laba warmo, mid ka mid ah dahabkii iyo lacagtii oo kale, kaalinta leh Sabuul bir ah.
Askarta ayaa, shaqaalaha rayidka ah, bogagga, messouflits iyo dhammaan dadka kale ee ka baxsan sii michouer geedaha jidka inta badan ku beeray (...) Ferrari kasta wuxuu leeyahay gabooye ah dhabarka iyo qaanso in gacanta idiinku jirto; wuxuu ku jiraa faras iyo jagadiisa, labada isqabqabsi iyo fiidiyoow, isaga hortiisa hortiisa ku istaagi ... "
Ugu dambeyntii nala soo shaandheeyo sheekooyinka sheekooyinka Leo Frobenius oo weli na siinaya qaddarin ku saabsan caadooyinka dharka ee qaar ka mid ah dadka Afrika ee xilliga gogoldhigga : "Marka (hageyaasha Yurub) yimid ee Bay of Guinea oo waxaannu ku degnay Vaida, saraakiishii ayaa la yaabay in la helo jidadka si fiican u magacaabay la dherer ah dhowr horyaal by laba saf oo geedaha, oo waxay ka gudbeen inta lagu guda jiro muddo dheer maalmood baadiyaha daboolay of beeraha qurux badan, ay deggan yihiin rag ku labisan dharka midabo ay tolmo maro isu!
koonfurta dheeraad ah, boqortooyada Congo, dadkii badnaa moodid a dhar xariir iyo maro jilicsan, dawladaha waaweyn iyo sidoo kale-ku amray iyo in si faahfaahsan kasta, taliyayaasha awood badan, warshadaha suudhka. Lagu daboolay dhuuxa lafaha! Dhamaantood waxay la mid ahaayeen xaaladaha dalalka ku yaal xeebaha bariga, Mozambique, tusaale ahaan. "
Badi sahamiyeyaashu waxay ku dheehan yihiin goobjoogayaal. Sidaa darteed markhaatifurintooda ayaa muhim u ah in la qiimeeyo horumarka bulshooyinka Afrikaanka ka hor. Sidaa daraadeed, Afrika Afrikaan ah ayaa lagu degenaa dadka oo ku noolaa heerar kala duwan oo madani ah. Hase yeeshee xaaladani ma aha mid Afrikaan ah tan iyo waqti isku mid ah Yurub waxaa jiray dad asal ah. Intaa waxaa dheer, dhammaan xilliyadii taariikhiga ahaa, tani waxay ahayd kiisaska qaarada oo dhan. Tusaale ahaan, bulshooyinka Gallic waxaa loo tixgeliyaa kuwa Roomaanka ah.
By JP Omotunde, cilmi-baadhaha taariikhda
SOURCE: Bonaberi  Taariikhda ilbaxnimada Afrika - Léo Frobénius - waxaa tarjumay Back iyo Ermont, Gallimard, Paris 1938 Warbixinta Socdaalka ee Xeebta Galbeedka Afrika - Alvise da Ca da Mosto - 1455 ilaa 1457 Eeg O. Dapper, Qeexida Afrika - 1668, Amsterdam Eeg safarada, G. Maspéro, ed. Soo hel, 1982 Cf. Safarka Suudaan - Ibn Batuta + Cajaladda iyo Nabadgelyada - Cheikh Anta Diop, Volume 2, ed. Joogitaanka Afrika cf. idem
laga bilaabo Sebtember 23, 2020 1:32
Kordhi fursadahaaga nolol hodan ah - Joseph Murphy (Audio)
Asalka asalka ah
Qabalah ayaa soo bandhigay (PDF)